Nei Tisarudze | Xiamen Yasin Indasitiri uye Trade Co., Ltd.
1. Yepamusoro Hwakananga Kugadzira
34-gore chiitiko chinogadzira mukugadzira gelatin yekushandisa mishonga uye inonyanyoshandiswa kune yakapfava kapsule, yakaoma capsule ganda, piritsi uye micro-kapuru.uye anopfuura makore gumi mune isina capsule ganda uye collagen mutsara. Iyo yekufanoona manejimendi, hunyanzvi hwesainzi mainstay, unopedza vane hunyanzvi mushandi wekugadzira, vakatendeka uye vanoshanda nesimba timu yekutengesa, uye zvakanyatso kudzora mhando.
2.Offering Yese Solution Uye technical Rutsigiro
Rutsigiro rwehunyanzvi runowanikwa. Isu tiri basa mukugadzira yakapfava kapsule kana yakaoma isina chinhu kapsule kana gummy bere kana uchishandisa gelatin yedu;
Mamwe makapisi anogona kugadzirwa nekushandisa iwo ma kgs egelatin kubva kune edu pane vamwe vatengesi.
4. Yakarongeka Kuchengetedza
Tine inokwana chengetedzo inokwana kuchengetedza huwandu hwakaringana kuti tiwane kukurumidza kutumira
5. GMP Yakawanda Yekugadzira Line
Isu tiri kunyatso kutevedzera neGMP standard pane yedu yekugadzira tambo iyo iine zviuru zana zvemusangano yakachena. nokudaro inogona kuvimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvinogona kugadzirwa munzvimbo yakachena uye otomatiki zvakapoterera.
7.Eco-Inoshamwaridzana Nharaunda Dziviriro
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza ibasa rese remurume. Isu takamisikidza yakazara yakazara nharaunda chengetedzo yekuchenesa tsvina sisitimu kuchengetedza yakasimba uye Eco-hushamwari nzira.
Vamiriri vedu vekutengesa vakatsaurirwa kupa sevhisi kune vatengi vedu. Ronga iwo maodha uye kutumira nezvikumbiro zvevatengi munguva, zvinoenderana nenyika dzakasiyana kutumira mutemo inopa zvakakwana magwaro ekuregedza tsika. Isu tinoda uye tinokwanisa kuenda mamaira ekuwedzera kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu.
9. Flexible Zvemari Kugadziriswa
T / T kana L / C zvinogamuchirika, othat muripo tems zvakare anogona kukurukurwa maererano customers'requirement.